A na-ejikarị ebe nrụọrụ weebụ eme ihe n'ọtụtụ ebe ụbọchị ndị a. Ọ bụ usoro mgbagwoju anya ma choo otutu oge na mgbalị. Otú ọ dị, ngwá ọrụ dị iche iche nke crawler weebụ nwere ike ime ka ọ dị mfe ma mezie usoro niile na-agba agba, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ma hazie - companies providing technical support. Ka anyị leba anya na ndepụta nke ngwa ngwa na-arụ ọrụ weebụ nke kachasị ike na nke bara uru ruo n'oge. Ngwaọrụ niile a kọwara n'okpuru ebe a dị ezigbo uru nye ndị mmepe na mmemme.